Al-Qaacida: Pompeo Oo Sheegay In Iiraan Ay Tahay 'Saldhigga Cusub' Ee kooxda
Wednesday January 13, 2021 - 12:14:53 in Wararka by Burco Office 2
Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa dowladda Iiraan ku eedeeyay in kooxda jihaad doonka ah ee al-Qaacida ay u oggolaatay in "saldhig cusub" ay ka sameysato halkaas.
"Si ka duwan Afghanistan, markii al-Qaacida ay isku qarineysay buuraha, al-Qaacida maanta waxay gabbaad ka heshaa maamulka Iiraan oo difaacaya," ayuu yiri.
Wasiika Arrimaha Dibadda Mohammad Javad Zarif ayaa hadalka Pompeo ku tilmaamay "been dhalineysa dagaal".
Bishii November ee la soo dhaafay, Iiraan ayaa beenisay war ku saabsanaa in taliyihii labaad ee al-Qaacida Abdullah Ahmed Abdullah, oo sidoo kale loo yaqaanno Abu Muhammad al-Masri, ay ciidamo Israa'iil ah ku toogteen Tehran, kaddib codsi uga yimid Mareykanka.
Shir jaraa'id oo uu shalay ku qabtay magaalada Washington, ayuu Mr Pompeo ku sheegay in markii ugu horreysay uu xaqiijinayo in Masri uu geeriyooday 7-dii August, inkastoo uusan faahfaahin dheeraad ah bixin.
"Joogitaankii Masri ee gudaha Iiraan waxay tilmaameysaa sababta aan halkan u joogno. Al-Qaacda waxay leedahay saldhig cusub: waa Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan."
"Taas waxaa ka dhashay, in hindisihii khaldanaa ee [Osama] Bin Laden uu hananayo awood."
Mareykanka ayaa sidoo kale abaalmarin gaareysa $7m (£5.1m) siin doona qofkii keena warbixin la xiriirta halka uu ku sugan yahay Maghrebi. Abaalmarinta waxaa haatanba la siiyay labo xubnood oo al-Qaacida ka tirsan oo la sheegay inay joogaan Iiraan - Saif al-Adel iyo Yasin al-Suri.
Kaddib markii uu sanadkii hore soo baxay warkii geerida Masri, wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan ayaa ku adkeysatay in wax "argagixisada" al-Qaacida ka tirsan aysan joogin gurigeeda.
Si kastaba, dadka arrimahan falanqeeya ayaa su'aal geliyay waqtiga uu hadalka Mr Pompeo ku soo aaday, iyagoo sheegay inuu u muuqday inuu isku dayayo in madaxweynaha la doortay Joe Biden uu ku adkeeyo inuu dib ula macaamilo Iiraan uuna Mareykanka dib ugu biiro heshiiskii nukliyeerka Iiraan ee 2015.